Fepetra sy fepetra - GBL Europe BV
Amin'ny alàlan'ny fividianana sy ny fanekena ny fitsaboana sy ny fepetra any amin'ny fivarotanay, dia manamafy isika fa ny y-butyrolactone izay azontsika avy amin'ny GBL Europe BV dia tsy ampiasaina amin'ny famokarana na fanamboarana fitaovam-piadiana simika, armational na fanamboarana fanafody tsy ara-dalàna na fanafody psychotropic. Mpividy dia hampiasa ny vokatra tokana ho an'ny fanadiovana na hanapotika ny tanjona. Manaiky ny mpividy fa ny vokatra dia tsy hamidy na haondrana mivantana na ankolaka amin'ny alàlan'izy ireo.
GBL Europe BV Fepetra sy fepetra
Ireo no tranokalanay General Terms and Conditions. Ireo fepetra sy fepetra ankapobeny ireo dia mihatra rehefa mampiasa ny tranokalanay na mametraka baiko amin'ny alàlan'ny tranokalanay, ary misy fampahalalana manan-danja ho anao amin'ny maha-mpividy azy. Azafady vakio tsara ireo. Manoro hevitra ihany koa izahay ny hitahiry na hanonta ireo Fepetra sy fepetra ankapobeny mba hahafahanao manadihady azy ireo amin'ny manaraka.
GBL Europe BV: miorina ao Holandy ary nisoratra anarana tamin'ny Chamber of Commerce ambanin'ny rakitra 71008470, varotra toy ny GBL Europe.
Tranonkala: ny tranokala Website / tranokala GBL Europe BV, ho hita ao amin'ny https // cleanandsolve.com htttps: //gbl-europe.com sy ny zana-bolany rehetra.
Fifandraisana: ny olona voajanahary na orinasa manao asa aman-draharaha na orinasa miasa amin'ny fifanarahana miaraka amin'ny GBL Europe BV ary / na voasoratra ao amin'ny tranokala.
Fifanarahana: misy fifanarahana na fifanarahana eo amin'ny GBL Europe BV sy ny mpanjifa izay ampahany amin'ny fomba sy ny fepetra amin'ny ankapobeny.
Fepetra sy fepetra ankapobe: Ireo fepetra sy fepetra amin'ny ankapobeny.
Fampiharana ny lalàna sy fepetra ankapobe
Ny Taratasy sy fepetra momba ny ankapobeny dia mihatra amin'ny tolotra rehetra, fifanarahana ary fandefasana ny GBL Europe BV, raha tsy hoe voasoratra an-tsoratra mazava.
Raha ny mpanjifa ao amin'ny baikony, ny fanamafisana na ny fifandraisana hafa milaza ny fanekena ny Fepetra ankapobeny sy ny fepetra dia misy fepetra izay tsy mitovy, na tsy tafiditra ao amin'ny Fepetraha sy fepetra amin'ny ankapobeny, ny fepetra toy izany dia hamehezana amin'ny GBL Europe BV ihany raha hatreto GBL Europe BV dia nanaiky azy ireo amin'ny fanoratana.
Amin'ny toe-javatra izay ampiharana ny vokatra sy ny fepetra manokana mifandraika amin'ny serivisy ankoatra ireo fepetra sy fepetra amin'ny ankapobeny ireo, ny Client dia afaka miantso ny fepetra azo ampiharina indrindra aminy raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fepetra sy ny fepetra ankapobeny.
Vidiny sy fampahalalana
Ny vidiny rehetra navoaka tao amin'ny tranokala sy ny fitaovana hafa izay niainga avy tao amin'ny GBL Europe BV dia misy hetra sy haba hafa apetraky ny governemanta, raha tsy hoe voatanisa ao amin'ny tranokala.
Raha lafo ny saram-pandefasana, dia holazaina mazava tsara izany alohan'ny hifaranan'ny fifanarahana. Ireo sarany ireo dia haseho an-tsofina manokana amin'ny fizarana baiko.
Ny votoatin'ny tranokala dia miaraka amin'ny fikarakarana lehibe indrindra. GBL Europe BV anefa tsy afaka manome antoka fa ny fampahalalana rehetra amin'ny tranokala dia marina sy feno amin'ny fotoana rehetra. Ny vidin-javatra sy ny fampahalalana hafa nalefa tao amin'ny tranokala sy ny fitaovana hafa izay nalaina avy amin'ny GBL Europe BV dia iharan'ny fandaharana miharihary sy ny hadisoana.
Ny GBL Europe BV dia tsy afaka tompon'andraikitra amin'ny fikorontanana amin'ny loko izay vokatry ny kalitaon'ireo loko aseho eo amin'ny efijery.
Ny fifanarahana dia raisina ho faran'izao fotoana izao no eken'ny Client ny tolotra GBL Europe BV manaraka ny fepetra napetraky ny GBL Europe BV.
Raha nanaiky ny tolotra amin'ny alàlan'ny elektronika ny mpanjifa, GBL Europe BV dia hanamafy ny fandraisana ny tolotra amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika tsy misy hatak'andro. Mandra-pahatongan'ny fahazoana an'io fanekena io dia hanana fahafaha-manafoana ny fifanarahana ny mpanjifa.
Raha fantatra fa, amin'ny fanekena na ny fidirany amin'ny Fifanarahana, ny mpanjifa dia nanome data diso, ny GBL Europe BV dia hanana fangatahana mety amin'ny fahazoana ny adidin'ny mpanjifa mandra-pandraisana ny angon-drakitra marina.
Mba hampiasa tsara ny tranokala, afaka misoratra anarana ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana / safidy fisoratana anarana ao amin'ny tranokala.
Mandritra ny dingana fisoratana anarana, ny Client dia hangatahana hisafidy anarana sy tenimiafina izay ahafahany miditra ao amin'ny tranokala. Ny mpanjifa irery ihany no tompon'andraikitra amin'ny fisafidianana ny tenimiafina azo itokisana.
Ny Client dia tsy maintsy mihazona ny fahazoan-dàlana miditra, ny anaran'ny mpampiasa sy ny tenimiafina. GBL Europe BV dia tsy azo ekena amin'ny fanararaotana ny fahazoan-dàlana amin'ny fahazoan-dàlana ary manana zo hatrany ny hiheverana fa ny Mpanjifa izay miditra ao amin'ny tranokala dia ny antoko izay ekeny. Ny mpanjifa no tompon'andraikitra ary mizaka ny loza feno amin'ny hetsika rehetra sy ny hetsika rehetra atao amin'ny alàlan'ny kaontin'ny mpanjifa.
Raha fantatry ny mpanjifa na manana antony hieritreretana fa efa misy ny antsipirian'ny mombamomba azy amin'ny fahazoan-dàlana dia tsy maintsy manova ny tenimiafany haingana araka izany ary / na hampahafantatra ny GBL Europe BV araka izany mba hahafahan'ny GBL Europe BV maka. fepetra mety.
Fanatanterahana ny fifanarahana
Raha vantany vao nahazo baiko ny GBL Europe BV dia handefa ireo vokatra any amin'ny mpanjifa tsy misy hatak'andro ny vokatra ary miaraka amin'ny fiheverana ny fepetra omen'ny andininy 3 amin'ity lahatsoratra ity.
GBL Europe BV dia nomena alalana hisitraka ny antoko fahatelo amin'ny fanatanterahana ny andraikiny eo ambany fifanarahana.
Alohan'ny mialoha ny fotoana nanasoniavana ny fifanarahana dia halefa ao amin'ny tranokala ny fampahalalana izay mamaritra ny fomba sy ny fomba hamoahana ireo vokatra. Raha tsy nisy fifanarahana na fanekena na voalaza, dia hatolotra ao anatin'ny 30 ny vokatra farany.
Raha tsy afaka mampita ireo vokatra ao anaty fehezan-teny ireo GBL Europe BV dia hampandre izany ny mpanjifa araka izany. Amin'izany toe-javatra izany dia afaka manapa-kevitra ny mpanjifa na hanaiky ny daty fandefasana vaovao na manafoana ny fifanarahana tsy misy vidiny na tsia.
GBL Europe BV dia nanoro hevitra ny mpanjifa mba hijery ny vokatra raha vao omena sy hitatitra ireo lesoka ao anatin'ny vanim-potoana mety, tsara kokoa amin'ny soratra na amin'ny mailaka. Raha mila fanazavana fanampiny, jereo ny lahatsoratra momba ny antoka sy ny fampifanarahana.
Ny risika mifandraika amin'ireo vokatra dia hamindra any amin'ny mpanjifa raha vao alefa any amin'ny adiresy fandefasana ny vokatra.
Raha tsy azo averina intsony ilay vokatra naterina dia omena GBL Europe BV ny manatitra vokatra izay ampitahaina amin'ny natiora sy ny kalitao amin'ny vokatra voatondro. Amin'izany dia hanana zo hanafoana ny fifanarahana ny Client nefa tsy misy vidiny ary averiny maimaim-poana ny vokatra.
Zo havanana / miverina
Ny Client dia manan-jo hanafoana ny elanelana lavitra amin'ny GBL Europe BV ao anatin'ny 14 kalandrie aorian'ny nahazoana ny vokatra, maimaim-poana ary tsy misy antony milaza. Nanomboka ny ampitson'ny vokatra voalazan'ny mpanjifa, na ny antoko fahatelo notendren'ny mpanjifa, izay tsy fety mpitatitra olona, ​​na:
- raha toa ka misy fanaterana na fizarana samihafa ny fanaterana vokatra: ny andro izay nahazoan'ny Mpanjifa, na ny antoko fahatelo notendren'ny Mpanjifa, ny fizarana farany na ny ampahany farany;
- miaraka amin'ny fifanarahana amin'ny famoahana matetika ny vokatra mandritra ny fotoana voafaritra: ny andro nahazoan'ny Mpanjifa, na ny antoko fahatelo notendren'ny mpanjifa ny vokatra farany;
- raha nanafatra vokatra maromaro ny mpanjifa: ny andro nandraisan'ny Mpanjifa, na antoko fahatelo notendren'ny Mpanjifa ny vokatra farany.
Ny vola mivantana ho an'ny fandefasana fiverenana ihany no natao ho an'ny kaontin'ny mpanjifa. Midika izany fa ny mpanjifa dia tsy maintsy mandoa ny vidin'ny famerenana ny vokatra. Ny sandan'ny fandefasana izay alain'ny Client sy ny vidin'ny vidiny dia haverina any amin'ny mpanjifa raha miverina ny baiko manontolo.
Nandritra ny vanim-potoana fanonganana voatonona ao amin'ny andalana 1 etsy ambony, ny Client dia hikarakara ny vokatra sy ny fonosany amin'ny fikarakarana tanteraka. Ny mpanjifa dia mety tsy manokatra ny fonosana na mampiasa ny vokatra raha tsy izany dia ilaina mba hamaritana ny toetran'ny vokatra sy ny endriny ary ny asany.
Ny mpanjifa irery dia tompon'andraikitra amin'ny fanalefahana ny vokatra izay vokatry ny fitantanany ny vokatra ankoatry ny ankatoavina ao.
Ny mpanjifa dia afaka manafoana ny fifanarahana mifanaraka amin'ny andalana 1 amin'ity lahatsoratra ity amin'ny alàlan'ny fitaterana ny fisintonana (nomerika na amin'ny endriny hafa) mankany GBL Europe BV, ao anatin'ny vanim-potoana fanalana, amin'ny alàlan'ny endrika modely ho an'ny zo hanonganana na amin'ny tsy fitoviana hafa lalana. Raha ny GBL Europe BV dia mamela ny Client hanambara ny fialana amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika / nomerika, aorian'ny nahazoana fanambarana toy izany, ny GBL Europe BV dia nandefa fanamafisana avy hatrany ny fandraisana.
Amin'ny haingana araka izay azo atao, saingy tsy mihoatra ny andro 14 taorian'ny andro nitaterana azy, voalaza ao amin'ny andalana 1, ny Client dia hamerina ilay vokatra, na hanolotra izany (solontenan'ny) GBL Europe BV. Ny mpanjifa dia afaka mandefa mivantana ny vokatra mankany amin'ny GBL Europe BV raha tsy misy fampandrenesana fisintonana mialoha ao anatin'ny vanim-potoana voalaza ao amin'ny andalana 1 Client dia tsy maintsy amin'ity tranga ity, asio fampandrenesana an-tsoratra momba ny fisintonana, toy ny endrika modely.
Afaka naverina amin'ny adiresy manaraka ireto vokatra ireto:
Izay sandam-bola efa nataon'ny mpanjifa (mialoha izany) haverina any amin'ny mpanjifa haingana araka izay azo atao ary misy tranga ao anatin'ny 14 andro aorian'ny fanonganana ny fifanarahana. Raha nifidy ny fomba fanaterana lafo vidy kokoa ny fandefasana ny mpanjifa bebe kokoa, ny GBL Europe BV dia tsy voatery hamerina ny vola fanampiny amin'ny fomba lafo kokoa.
Raha tsy amin'ny tranga izay nanoloran'ny GBL Europe BV ny haka ny vokatra dia azony atao ny manemotra ny famerenany mandra-pahazoany ilay vokatra na raha tsy efa manaporofo ny mpanjifany fa naveriny ilay vokatra, arakaraka izay niseho taloha.
Ny fampahalalana momba ny fangatahana na ny tsy fanovana ny zon'ny fialana ary ny fangatahana ilaina dia halefa mazava ao amin'ny tranokala, tsara alohan'ny hifarana.
Ny mpanjifa dia tokony handoa ny vola vokatry ny GBL Europe BV mifanaraka amin'ny fomba fandaminana ary ny fomba fandoavam-bola voalaza ao amin'ny tranokala. GBL Europe BV dia maimaim-poana hanolotra izay mety ho fomba fandoavam-bola ka mety hanova ireo fomba ireo amin'ny fotoana rehetra.
Ny ady sy ny fampifanarahana
Ity lahatsoratra ity dia mihatra raha tsy mihetsika amin'ny fahaizana matihanina na ara-barotra ny Client. Raha, na eo aza ny fanomezana farany, ny GBL Europe BV dia manome antoka tokana amin'ny vokatra, izany dia mihatra amin'ny karazana Mpanjifa rehetra.
GBL Europe BV mandahatra fa ny vokatra dia manome fahafaham-po ny fifanarahana, ireo voafaritra napetraka ao amin'ny tolotra, ny fepetra mitaky ny fahamaotinana sy / na ny fampiasana ary ny fitsipiky ny lalàna sy / na ny fitsipi-panjakana izay miasa amin'ny daty nanasoniavana ny fifanarahana. Raha nifanarahana manokana, ny GBL Europe BV dia hanome antoka ihany koa fa ny vokatra dia mety amin'ny tanjona hafa ankoatra ny fampiasana azy mahazatra.
Izay antoka rehetra natolotry ny GBL Europe BV, ny mpanamboatra na ny mpanafatra dia tsy hisy fiantraikany amin'ny zon'ny statutory sy ny fanambaràna izay efa azon'ny Mpanjifa ary mety hotononina amin'ny alàlan'ny fifanarahana.
Raha tsy mahomby amin'ny fifanarahana ilay vokatra natolotra, dia azon'ny mpanjifa atao ny mampahafantatra ny GBL Europe BV ao anatin'ny fotoana mahamety azy rehefa avy mahita ny lesoka.
Raha toa ka heverin'ny GBL Europe BV fa tsy haorina tsara ny fitarainana dia amboarina, hosoloana na averina averina hifampidinika amin'ireo mpanjifa ireo vokatra voakasik'izany. Mifanaraka amin'ny lahatsoratra momba ny andraikitra, ny refund dia tsy afaka mihoatra ny vidin'ny vidin'ny mpanjifa.
Fitarainana fitantanana ny fitarainana
Raha manana alahelo mifandray amin'ny vokatra iray ny mpanjifa (mifanaraka amin'ny lahatsoratra momba ny fiantohana sy mifanaraka amin'ny) ary / na momba ny lafiny hafa amin'ny GBL Europe BV ny serivisy, dia afaka mametraka fitarainana amin'ny telefaona, amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny paositra. Jereo ny antsipiriany fifandraisana amin'ny farany ambany amin'ny Fepetra sy fepetra ankapobeny.
GBL Europe BV dia hamaly ilay fitoriana, raha haingana, ary amin'ny toe-javatra rehetra ao anatin'ny 1 andro taorian'ny nahazoany azy. Raha mbola tsy azo atao ny GBL Europe BV dia mamorona fanehoan-kevitra lehibe momba ny fitarainana amin'io fotoana io, GBL Europe BV dia hanamarina ny fahazoana ny fitarainana ao anatin'ny 1 andro taorian'ny nahazoany azy ary hanome fampahafantarana ny fe-potoana andrasana ao. afaka manome fanehoan-kevitra lehibe na azo antoka momba ny fitarainan'ny mpanjifa.
Ity lahatsoratra ity dia mihatra raha ny Client dia olona voajanahary na fikambanana ara-dalàna izay manao asa matihanina na matihanina.
Ny fraisan'ny GBL Europe BV momba ny Client noho ny tsy fahombiazana amin'ny fanatanterahana ny fifanarahana dia voafetra ho fanonerana tsy mihoatra ny vidin'ny voatondro ho an'io fifanarahana manokana io (ao anatin'izany ny VAT).
Ny andraikitry ny GBL Europe BV amin'ny fanajana ny mpanjifa noho ny fahasimbana na fatiantoka ankolaka, izay amin'ny tranga rehetra dia - tsy voafetra ho amin'ny fahavoazana aterak'izany, fahaverezam-bola, very vola tahiry, fahaverezan'ny data sy fanimbana noho ny fanelingelenana orinasa. foana izany.
Ankoatra ireo raharaha voalaza ao amin'ireo andalana roa amin'ity lahatsoratra ity, ny GBL Europe BV dia tsy iharan'ny trangan-kery mihitsy na amin'ny Client ho an'ny fahavoazana, na eo aza ny antony nametrahana ny hetsika ho fahavoazana. Ny fameperana napetraka ao amin'ity andiany ity anefa dia tsy hitsahatra ny mampihatra raha toa ka ny fahatsapana fahavoazana na fatiantoka dia vokatry ny fihetsika na faniratsirana mihoa-pampana amin'ny lafiny GBL Europe BV.
GBL Europe BV dia ho tompon'andraikitra amin'ny mpanjifa fotsiny noho ny tsy fahombiazan'ny fanatanterahana ny fifanarahana raha ny Client dia mamoaka fampandrenesana fanao mahazatra amin'ny GBL Europe BV raha tsy misy fahatarana dia nanisy fe-potoana mety hanemorana ny tsy fahombiazana. ary ny GBL Europe BV dia manohy tsy mahavita ny andraikiny aorian'io fotoana io. Ny fanamarihana ny fanefana dia tsy maintsy misy famaritana ny tsy fahombiazana amin'ny antsipiriany araka izay azo atao mba hahafahan'ny GBL Europe BV manome valiny mifanaraka.
Na inona na inona hetsika manome onitra dia miankina foana amin'ny toe-javatra izay mitantara ny mpanjifa na ny fatiantoka an-tsoratra amin'ny GBL Europe BV haingana araka izay azo atao, fa tsy mihoatra ny ao anatin'ny 30 andro taorian'ny nipoiran'ny fahasimbana na ny fatiantoka.
Raha toa ny hery majeure GBL Europe BV dia tsy tompon'antoka amin'ny fanonerana ny fahavoazana na fatiantoka nateraky ny mpanjifa vokatr'izany.
Ny fitazonana ny lohateny
Raha mbola tsy nanao fandoavam-bola feno ny mpanjifa amin'ny totalin'ny nifanarahana GBL Europe BV dia hitazona ny fananana ny entana rehetra natolotra.
Ny antsipiriany manokana
GBL Europe BV dia hizotra amin'ny antsipiriany manokana momba ny mpanjifa mifanaraka amin'ny fanambarana momba ny tsiambaratelo navoaka ao amin'ny tranokala.
Ity fifanarahana ity dia fehezin'ny lalàna ao amin'ny firenena nananganana ny tranokala web.
Raha tsy voafitaky ny lalàna mandidy, dia misy ny fifandirana amin'ny fifanarahana dia hatolotra ny fitsarana holandey amin'ny distrika izay misy ny GBL Europe BV ny biraony voasoratra.
Raha misy fepetra omena ao amin'ireto toetoetra sy fepetra ankapobe ireto dia tokony hanaporofoana fa tsy haingam-pandeha, tsy hisy fiantraikany amin'ny maha-ara-dalàna ny Fomba sy fepetra amin'ny ankapobeny. Amin'izany, ny antoko dia hametraka ny famatsiana iray na maromaro ho solon'izay hanehoana ny fandaharana tany am-boalohany araka izay azo atao eo ambanin'ny lalàna.
Ny teny hoe 'voasoratra' ao amin'ireto Taratasy sy fombafomba ankapobeny ireto dia miresaka momba ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny mailaka sy fax, raha toa ka voaorina tsara ny mombamomba ny mpandefa sy ny fahamarinan'ny hafatra mailaka.
Raha manana fanontaniana, fitarainana na fanehoan-kevitra ianao aorian'ny famakiana ireo fepetra sy fepetra ankapobeny ireo dia azafady mba ampiresaho izahay amin'ny mailaka na taratasy.
E: [email voaaro]
Fisoratana anarana: GM486603-26
! Tsy ho an'ny fanjanana ary mety maty raha maty